Ogaden News Agency (ONA) – Finland oo laga xusay Maalinta Xasuusqa Ogadenia
Finland oo laga xusay Maalinta Xasuusqa Ogadenia
Posted by ONA Admin	/ March 17, 2013
Waxaaa lagu qabtay magaalada Helsinki ee caasimada dalka Finland xuskii Maalinta Xasuuuqa Ogadeniya, taaso abaarihii 4:00 galabnimo si rasmi ah loogu bilaabay aayado qur’aan ah oo loo akhriyay shuhadadii iyo dhamaan dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay Ogadenya.
Kadib, Xoghayaha Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya OYSU mudane Yuusuf ayaa furay barnaamijka kana warbixiyey sababta laysugu yimid. Sheekha jaaliyada mudane digaale ayaa isna wacdi diini ah kasoo jeediyey goobta.
Intaa ka dib ayaa codbaahiyaha waxaa lagusoo dhoweeyey gudoomiyaha jaaliyada ahna xoghaynta HAAB mudane Xasan Kamaal oo ka sheekeeyey taariikhda halganka bilow ilaa dhamaad iyo gumeysiyadii kala danbeeyey siday u gumaadi jireen shacabka Ogadenya, soona jeediyey warbixin qiimo badan oo ku saabsanayd xasuuqa ka socda Ogadeniya.
Mudane Cabdullaahi oo isagana hadal qiimi badan ka jeediyay madasha ayaa ku dheeraaday aadna uga sheekeeyey wax waxa ka socda Ogadeniya iyo tacadiyada xasuuqa iyo jidhdilka iyo kufsiga. Sidokale waxaa meesha ka hadlay dad badan oo isugu jira masuuliyiin iyo shacabba.
Barnaamijka ayaa xalay abaarihii 10:00 fiidnimo kusoo dhamaaday jawi wanaagsan.